La yaabka dunida:Nin gabdho & hooyadood isla guursadey caruurna ka dhalay – SBC
La yaabka dunida:Nin gabdho & hooyadood isla guursadey caruurna ka dhalay
Posted by editor on September 30, 2011 Comments
La yaabka aduunka ee subax kasta aan soo tabino maalinba dunida gees ka mid ah ayuu ka soo sheegaa dhacdooyin qaarkood bini’aadamku ay sida xayawaankii u dhaqmayaan.
Ma halagaa sheegaa, ma diin la’aan & caqiido la’aanbaa , ma dhaqan xumo & fasahaad baa ?, tu ay tahayba dhacdo aan sheeko & shaahid midna dunida loo soo warin ayaan ka soo tabinaynaa maanta wadanka Brazil ka dib markii nin 90 sani jir ah uu 50 caruur ah ka dhalay afar dumar ah oo sadex ka mid ah ay yihiin hooyo iyo laba gabadhood oo ay dhashay.
Luiz Costa de Oliveira oo ahaa nin beeraley ah una dhashay wadanka Brazil ayaa shaaca ka qaaday in uu 50 caruur dhalay, isagoo ku faanay in waxa ILAAH u sahlay ay yihiin haweenka, balse Luiz wuxuu farta ku fiiqay inaanu xusuusan karin magacyada dhamaan caruurta uu dhaley oo qaarkood ay u geeriyoodeen nolasha faqiirnimada diinta la’aanta ah ee ay ku nool yihiin iyo waliba cuduro.
Luiz xaaskiisii ugu horeysay oo lagu magacaabi jirey Francisca waxay u dhashay 17 caruur, waase ay geeriyootey.
Luiz hasaawaha aduun kama harin wuxuu jacal u banbixiuyey Maria Francisca da Silva oo haatan 64 sano jir ah iyadoo ay isku dhaleen 17 kale oo caruur ah.
Laakiin sheekad la yaabkeeda uu dhacdey markii Maria walaasheed ay badiy maciin si ay caruurta faraha badan ula xanaaneyso, balse Luiz oo ah bahal shabeel naagood ah wuxuu hoosta xiriir saaxiibtinimo kala galey dumaashidiisii ilmo korinta loo soo kaxaystey waxaaana halkaasi uga bilwodey guur 15 caruur ah ay u dhashay.
Luiz intaasi kuma ekaan oo ugu dambeyntii wuxuu ku dhaqaaqay tii ugu darneyd & dhalisay dhabanaheys iyo in farta lagu fiiqo meel kasta oo uu marayo ilmuhuna ka daba qaataan waa markii uu hoos ugu dhigay labadii halbood ee caruurta u dhaley hooyadood, isagoo hal cunug kaga soo tuuray waxaana wali uu la nool yahay duqdaasi oo 89 sano jir ah
Luiz wuxuu awoowe u yahay in ka badan 100 caruur ah isagoo sidoo kale 30 kale abkow uu u yahay, waxaana ninkaasi uu ku faanayaa in uu wali diyaar u yahay ciyaaraha sariirta uuna jecel yahay hasaawaha dumarka.
Maria Francisca ayaa tiri “Luiz waa xariif sare oo ku wanaagsan jaceylka sida loo abuuro, waligiis si dhaqan xun noolama dhaqmin, mar kastana wuxuu jecel yahay in uu caruurtiisa daryeelo inaguna waligeen wax kale kama aynan doonin!”.
ma makaagag says:
kkkkkkk waa yaab wx caqliga gali kara maha mowliid wxn lkn way dhici kartaa sida lasheegay waa xariif xaga dumarka ninkaas
hhhhhhhhhhhh layaab badanaa war ma xoolaa dadkani lool
Layaab runtii waa wax laga xishoodo mahana wax qof diin leh ku dhaqma alle diinta macaan ee islamka hagaar siiyo
waxan ka baqi iney reer bariga ku dhacdo iyagaa naaga jecl
waa ke ii shega hee maa oday ga ama islan taa